गेष्टहाउस, यौन ब्यवसाय र कानुन
फोटो गुगल बाट सर्च गरि राखिएको हो ।
मेरो ख्यालमा हाम्रो नेपाली समाजमा सबभन्दा बढि गलत ढंगले ब्याख्या गरिने विषय केहि छ त, त्यो यौन सम्बन्धि सन्दर्भ नै हुनुपर्छ । मानिसहरू यौनका विषयमा यति गम्भिर देखिन्छन् कि कोही व्यक्तिको कोही युवतीसँग उठबस बढ्न थाल्यो भने मान्छेहरू उनीहरूका विषयमा टिकाटिप्पणी गर्न एकदमै लालयित हुन्छन् । राम्रा/नराम्रा, जायज/नाजायत हरेक किसिमका टिप्पणीहरू हुन पुग्दछन् । अझ कुनै पनि व्यक्ति यौनका मामलामा कमजोर देखियो भने त झन उसको दीनदशा बिग्रयो भन्ने जाने हुन्छ । मानौं उसले यति ठूलो अपराध गरेको छ कि जिन्दगीभर उ क्षमायोग्य मान्छे हुनै सक्तैन ।
भन्न त मान्छेहरू भन्छन्, यौन प्राकृतिक कुरा हो । जैविक आवश्यकता हो । र, यसको आवश्यकतालार्इ कसैले पनि नकार्न सक्तैन । तर मान्छेहरू जब कोहीलार्इ यौनका विषयमा खुल्न थालेको पाउँछन् अनि फेरि फरक बन्न पुग्छ, उनीहरूको दृष्टिकोण । अब यौन न त प्राकृतिक कुरा नै हुन्छ न त जैविक आवश्यकता नै । मान्छेहरू यसलार्इ सामाजिक संस्कार अनि मूल्य र मान्यतासित जोडेर हेरिदिन्छन् । अरू त अरू एक बलात्कृत नारीको विवशताको समेत खिल्ली उडाउन थाल्छन्, मान्छेहरू । उसप्रति हेर्ने नजरमा परिवर्तन गर्छन् मान्छेहरू । र, उ लाचार जिन्दगी ज्यून विवश हुन्छे/पारिन्छे । चूनौतीसँग पौठेजोरी खेल्न सक्ने धेरै कम बलात्कृतहरू मात्र स्वभाविक मृत्युवरण सम्म जिन्दगी ज्यून सक्छन् तर धेरै बलात्कृतहरू अस्वभाविक मृत्युको मुखमा धकेलिन बाध्य हुन्छन्, हाम्रो समाजमा । यस्ता घटनाहरू हाम्रा समाजमा दिनानुदिन घटिरहेका छन् । तर यसको सहि विश्लेषण कहिँ कतैबाट भएको देखिदैन ।
यो लेख्दै गर्दा, मैले एउटा घटना सम्झेको छु । केहि महिना अगाडि पोखराको कुनै डाँडोमा एक अधवैशें जोडीलार्इ यौनान्द लिइरहेका बेला प्रहरी टोलीले उनीहरूलार्इ रंगेहात पकड्यो । त्यो मोबार्इलबाट खिचिएको दृश्यमा ती जोडीबिचको केहि मिनेटको यौनिक क्रियाकलापलार्इ कैद गरिसकिएको अवस्थामा मात्र उनीहरूले आफूहरूको कार्यकलापलार्इ कसैले चियाइरहेको थाहा पाउँछन् । जब उनीहरू उठेर कपडा लगाउन थाल्दछन्, तब उनीहरू माथि विभिन्नथरीका प्रश्नहरू सोध्ने काम गरिएको छ । सायद, त्यसपछि उनीहरूलार्इ गिरफ्तार गरियो र प्रहरी चौकीमा लगियो । उनीहरूलार्इ कस्तो कारबाही गरियो ? र, के सजाय भयो ? त्यो त म जान्दिन । तर मलार्इ लागेको, एकजोडी मानव बस्तीभन्दा धेरै टाढा, एकान्तमा कतै, आपसी समझदारीमा यौन सम्पर्क गरिरहेका छन, त्यहाँ कसैलार्इ केहि अप्ठ्यारो हुने अवस्थै छैन तथापि प्रहरी त्यहाँ पुगेको छ । उनीहरूको भिडियो खिचेको छ । र, सायद गिरफ्तार गरेर सजाय पनि गर्यो । मलार्इ उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा यौनानन्द लिन पाउने मानब अधिकारप्रति प्रश्न गर्नु छैन । तर बलात्कारका घटनाका सयौं फरार दोषीहरूको अनुसन्धानमा नलागेर प्रहरी किन यसरी आपसी समझदारीमा यौनकार्य गर्नेहरूको पिछा लागिरहेको छ ? के यहाँ कसैलार्इ आपसी समझदारीमा यौनकार्य गर्न पाउने अधिकार छैन ? झन गम्भिर विषय त यो छ कि, के प्रहरीले कसैको यौनसम्बन्धि क्रियाकलापको भिडियोलार्इ प्रकाशमा ल्याएर उनीहरूको सार्वजनिक बेइज्जत गर्न पाउँछ ? के प्रहरीहरूलार्इ कसैको यौनसम्बन्धि व्यक्तिगत गोप्यतालार्इ भंग गर्ने अधिकार प्रत्योजित छ त ? छैन भने, त्यो अपरेशनमा खटिएका प्रहरीहरूलार्इ कानुनको दायरामा ल्याइनु पर्छ कि पर्दैन ?
म थुप्रै पटक परेको छु, ठमेलमा हिड्दै गर्दा दश एघार वर्षका किशोरहरू मेरा हात समाउन आउँदै, 'दार्इ, ...... पडकाउने हो ?' बजारभित्र त्यो पनि ठमेल जस्तो पर्यटकिय क्षेत्रमा यौन ब्यवसाय यसरी सडकमा छताछुल्ल छ । डान्सबारमा युवतीहरूको एक नांगो स्पर्शका लागि साहु/महाजनहरू हजारौका नोटहरू फ्याकिरहेका छन् । पैसाको लोभमा साना केटाहरूलार्इ यौन ब्यवसायको दलालका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । प्रहरी मौन छ । त्यहाँ माथिको आदेश छैन ! डाँडामा पुगेर यौनकार्य गर्नेहरूलार्इ गिरफ्तार गर्न सक्ने प्रहरीहरू किन गेष्टहाउस, डान्सबार र मसाजकेन्द्रमा चलिरहेको व्यवासायिक यौन धन्दामा केहि दख्खल दिन सक्दैन ? म यौन व्यवसाय बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा हैन यौन ब्यवसायमा लाग्नका लागि कसैको मानव अधिकारलार्इ कुण्ठित गरिएको छ भने त्यसलार्इ बन्द गर्नुपर्छ भन्नेको मान्यता राख्ने ब्यक्ति हुँ । यौन व्यवसायलार्इ सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्छ । न कि यसको अवैधानिक कारोवार गरी माथिल्लो तहमा रहेका दुर्इ चार जनाले आर्थिक ब्रम्हलुट गर्न पाउन ।
विश्वका थुप्रै देशहरूमा आफ्ना नागरिकको यौन अधिकारलार्इ गम्भिरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने काम भएको छ र त्यहाँ सामाजिक मूल्य मान्यतामा खलल नपुग्ने गरी यौग कार्यका लागि आफ्ना नागरिकहरूलार्इ अधिकार प्रत्योजित गरिएको छ । यौनब्यवसाय, कोठी सञ्चालन तथा यौनकर्मी र ग्राहकबीच पुलको काम गर्ने एजेन्टलार्इ समेत कानुनी मान्यता दिइएको छ । अर्जेन्टिना, अर्मेनिया, अष्ट्रिया, बेल्जीयम, इजरायल, इटाली, डेनमार्क, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, जर्मनी, ग्रिस, सार्इप्रस, आयरल्याण्ड तथा बेलायत जस्ता देशमा यौन ब्यवसायलार्इ कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छ । अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया र आइसल्याण्डजस्ता देशमा केही हदसम्म यौन ब्यवसायलार्इ कानुनी मान्यता दिइएको छ । यौनब्यवसायका सम्बन्धमा सिमित कानुनी मान्यता रहेको स्वीडेनमा महिलाले यौन बिक्री गर्नुलार्इ अपराध ठानिदैन तर जबरजस्ती गरिने खरिद भने अवैधानिक ठहरिन्छ । त्यसैगरी यौन ब्यवसायलार्इ कानुनी मान्यता दिइएको अर्को विकसित देश हो – स्वीटजरल्याण्ड । जहाँ यौनकर्मीले स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्दछ । र, नियमित स्वास्थ्य जाँच उनीहरूका लागि बाध्यकारी नियम हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको आयकर पनि सरकारलार्इ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ज्यूरिचमा प्रतिहजार मान्छे बराबर ११ जना यौनकर्मी उपलब्ध छन् । त्यसैगरी एक अनुसन्धानले पुष्टी गर्दछ, टर्कीमा १५ हजार दर्तावाल यौनकर्मीहरू छन् । ती मध्ये ३ हजारले ५६ वटा यौनालयमा काम गर्दछन् । विश्लेषकहरूको अनुमान छ कि ति बाहेक पनि टर्कीमा १ लाखको हाराहारीमा दर्ता नभएका यौनकर्मीहरू छन् । अरू तथ्याङ्क हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस ।
त्यसैगरि केहि वर्ष पहिले युथ फोरम नामक एक संस्थाले काठमाडौंमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार झण्डै १० हजारको हाराहारीमा नेपाली महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा यौन ब्यवसायमा संलग्न रहेको तथ्य उजागर गरेको थियो । यसमा पनि अझ महत्वपूर्ण कुरा त त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीहरू छन् ।नपत्याएँ यहाँ क्लिक गर्नुस यो तथ्यले पनि प्रमाणित गर्दछ‑ अब नेपालमा पनि यौन ब्यवसायलार्इ कानुनी दायराभित्र ल्याइ अतिशिघ्र व्यवस्थित गर्नु जरूरि छ । अब गेष्टहासका कोठाहरूमा प्रहरीलार्इ छापा मार्न लगाउनु भन्दा बरू यो व्यवसायलार्इ ब्यबस्थित गर्नमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन जाला । कम्तिमा पनि यौन ब्यवसाय ब्यबस्थित हुन सकेमा यस्तो ब्यवसायमा किशोरीहरूको संलग्नता हुने सम्भावना नै रहने थिएन । साथै ब्यवस्थित ब्यवसायले यौनजन्य रोगहरूमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । त्यतिमात्र हैन सरकारको राजस्वमा यस ब्यवसायबाट करौडौ रकम जम्मा पनि त हुन्थ्यो ।
Samajko arthik, samajik ra sanskritik pakchhya ma bislesanatmak lekh ka lagi Dhanyabad. Yaun byawasaya byawasthit ra maryadit banaunu parchha vanne mero dharana raheko chha.